सायद अब, अत्यधिक विकास उद्योग को युग मा, यो असम्भव सबैलाई हार्डवेयर को अधिग्रहण सम्बन्धित कठिनाइ अनुभव गर्न सक्छन् जो एक स्थिति कल्पना छ। म नोवोसिबिर्स्क बस्ने, तर आवश्यकता खडा अघि साधारण धातु छन् जो बिरुवाहरु, रुचि कहिल्यै थियो। एक दिन म एक उच्च गुणस्तरीय अंधा फेला पार्न आवश्यक छ। खोज पछि, यो व्यायाम गाह्रो हुन्छ भन्ने स्पष्ट भयो। त्यसपछि म खोज प्रश्न स्ट्रिङ "शटर नोवोसिबिर्स्क" मा लेखेर नेटवर्क बारी निर्णय गरे। सम्भव विकल्पहरू संख्या खोज प्रक्रिया थकित को विचार गर्न धक्का, र त म मूल्य / गुणस्तर मिल्ने लागि सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट निर्धारण गर्न परिणाम पहिलो 10 विकल्पहरू तुलना गर्ने निर्णय गरे। अंधा किनेको गर्न सकिन्छ - यो केवल सस्तो पाउन र गुणस्तर सजिलो थिएन, समाचार को एक टुक्रा छैन। र अझै, म सही फेला परेन। एक सम्झौता पछि, म यो कम्पनी को दृष्टि गुमाउन छैन निर्णय र oddly पर्याप्त, एक महिना पछि म फेरि आफ्नो उत्पादन आवश्यक थियो। अर्को समय आवश्यक जाली मा। तपाईं यस लिंक मा स्लाइड विन्डो मा जाली मा राख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले केही अनुकूल परिमार्जन पाउन सक्नुहुन्छ, तर म केही भेद गरिएको छ। यो किनभने स्लाइड बन्द-ग्रिड ओभरले विन्डो मा, म तिनीहरूलाई केवल काम गर्न आवश्यक छ। तपाईं चयन गर्नु अघि, म इस्पात संरचना "जाली नोवोसिबिर्स्क" मा निर्मित को पूर्ण सीमा सिके। अन्त मा, म अरूको सहायता गर्न resorting बिना, जो आफ्नै विस्तार गर्न सकिन्छ आँखीझ्याल, को आदेश गरे।
कार्यालय को निर्माण र आफ्नो घरेलु - म2ठूलो परियोजनाहरू पूरा गर्न भएको थियो। पक्कै, यो फरक धातु उत्पादन को एक विशाल संख्या किन्न आवश्यक थियो। "बंद नोवोसिबिर्स्क" - यस्तो मार्केटिङ सन्देशहरू बारेमा इन्टरनेटमा भेट गरेका छन्, तर म, को विरोधीहरूले बोनस छुट प्रदान गरेको छ भने मामला मा एक सिद्ध कम्पनी संग सहयोग गर्न इन्कार गर्न जाँदै थियो। मेरो कार्यालय को टाउन जस्तै गति बारेमा बनाइएको थियो। ग्लाजिंग प्राप्त भएको थियो, साथी को अनुहार मा नोवोसिबिर्स्क केही भेरिएसनहरूमा प्रस्ताव गर्न सक्छ, तर म सतह मा विभाजन को एक सानो संख्या र सुरक्षा खोल संग संस्करण लागि बन्द गर्ने निर्णय गरे। को मकान यसको तार्किक निष्कर्षमा2आए साथै सिढी को उडान, यो एक डन्डीको बार स्थापना गर्न आवश्यक थियो। म उपखण्ड मा रेलिंग विकल्पहरू हेर्न थाले - "। यस कौसी डन्डीको बार लागि" म बारेमा पन्ध्र मिनेट खर्च सही लागि खोज। खोज परिणाम थिए स्टेनलेस स्टील Handrails सुरक्षित हुन।
को boathouse लगभग समाप्त भएको थियो जब, म ग्यारेज भविष्य रूपान्तरण गर्न स्वीकार गरिएको थियो। गेट परिमार्जन को विकल्प संग मुद्दा एकदम जोडले उठाएको थियो, तर अन्त मा म स्लाइड को प्रकारको छनौट गरे। के उच्च गुणवत्ता उत्पादन गर्न भन्न, ग्यारेज ढोका नोवोसिबिर्स्क, तर यहाँ तपाईं खातामा धातु प्रकार र कार्यान्वयन को डिजाइन उत्कृष्टता लिनु आवश्यक छ। स्वचालित नियन्त्रण बारे मा भूल छैन। गेट्स नोवोसिबिर्स्क, धेरै हालै गर्न थाले मात्र अब तिनीहरूले एक लामो समय टिक्न हुनेछ स्पष्ट छ। स्वचालित रोलर अंधा साथै पहिलो वर्ष भइरहे, म पनि गम्भीर चिसो मा, माथि हुन्थे कहिल्यै। म भविष्यमा सबै मा यस्तो उच्च तहमा हुनेछ लाग्छ।
आफ्नै हातले बसाई सराई अन्तर्गत Crate
प्लाईवुड। प्लाईवुड, मोटाई, आवेदन को सबै भन्दा राम्रो तरिका
प्लास्टिक Windows कुन राम्रो छ?
को स्नान मा बालकनी मा देश मा screed ठोस, अन्तर्गत तल्ला लागि इन्सुलेशन,
हावा ducts को आगो सुरक्षा: उद्देश्य, किसिम, तरिका
कसरी आफ्नै हातले एक पट्टी जग बनाउन?
क्लब Ege प्राचीन4* - सिर्फ एक राम्रो होटल
Borsch लागि मसला। नुस्खा। को जाडो लागि तयारी
बवासीर। यसको कारण
Mstinsky पुल - ईन्जिनियरिङ् को एक अद्वितीय टुक्रा र eponymous गाउँ
Squamous सेल कार्सिनोमा।
धूम्रपान सजिलो छैन
पोल्का डट्स संग फैशन नङ
कथा, दृष्टान्तहरू र योजना: कथा "Kalinov पुल मा लडाई"
दबाइ 'Kuriozin': बयान
34 हप्ता गर्भवती
फोम ग्लास को बेफाइदा। थर्मल इन्सुलेशन सामाग्री
इन्जिन समर्थन कसरी र यसको लागि के हो?